Thermodynamics: ihe ọ bụ, njirimara na ụkpụrụ | Network Meteorology
Na ụwa nke physics enwere ngalaba na-ahụ maka ịmụ mgbanwe ndị a na-ewepụta site na okpomọkụ ma rụọ ọrụ na sistemụ. Ọ bụ ihe gbasara ihe na-ekpo ọkụ. Ọ bụ alaka nke physics nke nwere ọrụ maka ịmụ mgbanwe niile nke bụ naanị nsonaazụ nke usoro metụtara mgbanwe dị na steeti nke ọnọdụ okpomọkụ na ume na ọkwa macroscopic.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ikwesiri ịma gbasara tembọdamịikị na ụkpụrụ thermodynamics.
2.1 Iwu efu
2.2 Iwu mbụ nke Thermodynamics
2.3 Iwu nke abụọ nke thermodynamics
2.4 Iwu nke atọ nke thermodynamics
Ọ bụrụ na anyị emee nyocha nke oge ochie anyị na-ahụ na ọ dabere na echiche nke usoro macroscopic. Usoro ihe a abụghị ihe ọzọ karịa akụkụ anụ ahụ ma ọ bụ nke echiche nke e kewapụrụ na gburugburu ebe obibi. Iji na-amụkwu sistemụ thermodynamic ka mma, a na-eche ya mgbe niile na ọ bụ oke anụ ahụ nke na-anaghị echegbu onwe ya site na mgbanwe nke ike na usoro okike.
Ọnọdụ nke usoro macroscopic kedu ihe ọ bụ na ọnọdụ nhazi ọ na-akọwapụta ya site n'ọtụtụ a na-akpọ mgbanwe thermodynamic. Anyị maara mgbanwe ndị a niile ma ha bụ ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide, olu na kemịkal. Ihe mgbanwe niile ndị a bụ ihe kọwapụtara sistemụ na njiri mara ha. E guzobere isi ihe edeturu na thermodynamics kemịkalụ maka njikọ mba ụwa etinyere. Na ndị a nkeji iwu nke thermodynamics nwere ike mma-arụ ọrụ ma kọwaa.
Agbanyeghị, enwere ngalaba nke thermodynamics nke na-anaghị amụ nhazi, mana ọ bụ maka nyocha usoro thermodynamic nke ejiri mara ya enweghị ikike iji nweta ọnọdụ nguzozi n'ụzọ kwụsiri ike.
A katọrọ ụkpụrụ na narị afọ nke XNUMX na ndị na- Ha na-ahụ maka ịhazi mgbanwe niile na ọganiru ha. Ha na-enyochakwa oke ihe bụ oke iji wee nwee ezi ịtụrụ ime. Ha bụ axioms ndị na - enweghị ike igosi ma ha enweghị ike ịdabere na ahụmịhe. Ozizi ọ bụla nke thermodynamics dabere na ụkpụrụ ndị a. Anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ atọ gbakwunyere ụkpụrụ mana nke ahụ bụ nke na-akọwa ọnọdụ okpomọkụ yana nke ahụ pụtara na ụkpụrụ 3 ndị ọzọ.
Anyị ga-akọwa ihe iwu iwu efu a bụ, nke bụ ihe mbụ ịkọwa ọnọdụ okpomọkụ nke pụtara na ụkpụrụ ndị ọzọ. Mgbe sistemụ abụọ na-emekọrịta ihe ma nọrọ na nhazi ogo ha na-ekerịta ụfọdụ n'ime njirimara ahụ. Njirimara ndị a ha na-ekerịta ibe ha nwere ike tụrụ ma nye ha ọnụọgụ ọnụọgụ. N'ihi ya, ọ bụrụ na sistemụ abụọ a ga-aha nhatanha na nke atọ, ha na ibe ha ga-arụ nhatanha na ngwongwo a na-ekekọrịta bụ ọnọdụ okpomọkụ.
Ya mere, ụkpụrụ a ma na-ekwu na ọ bụrụ Ahụ A nọ na nhazi ahụ na ahụ B ma ozu B a ga-enwe nhazi nhazi na ahụ C, mgbe ahụ ozu A na C ga-anọ nha nha kwes. Principlekpụrụ a na-akọwa eziokwu ahụ bụ na ahụ abụọ na okpomọkụ dị iche iche nwere ike ịgbanwe okpomọkụ na ibe ha. N'oge na-adịghị anya, ozu abụọ ahụ ga-erute otu okpomọkụ, yabụ na ha niile nwere nhazi.
Iwu mbụ nke Thermodynamics
Mgbe aru batara na aru nke di oyi, mgbanwe na eme nke na adota onodu nke itule. Ọnọdụ nhazi a dabere n'eziokwu na ọnọdụ okpomọkụ nke ahụ abụọ ahụ nha anya ebe ọ bụ na a na-eme ka nnyefe nke ike dị n'etiti ahụ dị ọkụ maka ahụ oyi. Iji kọwaa ihe a, ndị sayensị chere na ihe na-ekpo ọkụ nke dị n'ọtụtụ buru ibu, gafere ahụ oyi. Echere ya banyere mmiri nke nwere ike ịgafe na uka ahụ iji nwee ike ịgbanwe okpomọkụ.
Thiskpụrụ a bụ ọrụ maka ịmata okpomọkụ dị ka ụdị ike. Ọ bụghị ihe onwunwe. N'ụzọ dị otú a, enwere ike igosi na okpomọkụ, nke a tụrụ na calorie na ọrụ a tụrụ na joules, bụ otu. Ya mere, anyị maara taa na 1 kalori dị ihe dị ka 4,186 joules.
Enwere ike ikwu na ụkpụrụ mbụ nke thermodynamics bụ ụkpụrụ nke nchekwa nke ike. A na-agbanwe ike dị na igwe ọkụ na-arụ ọrụ ma nwee ike ịhụ ya site na igwe ọ bụla nwere ike ịrụ ọrụ dị otú a na-enweghị ike. Anyị nwere ike ịmepụta ụkpụrụ mbụ a dị ka: mgbanwe nke ike dị n'ime nke sistemụ thermodynamic mechiri emechi bụ ihe dị iche na etiti dị n'etiti okpomọkụ a na-enye na sistemụ yana ọrụ nke sistemụ kwuru na gburugburu ebe obibi.
Iwu nke abụọ nke thermodynamics
Nke a na mbido na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume ịme igwe igwe nke na-ebute naanị mbufe ọkụ site na ahụ oyi na ahụ ọkụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ gaghị ekwe omume na enwere ike ịme mgbanwe nke ihe ga-abụ naanị nke ịtụgharị okpomoku nke anyị si na otu ebe wee rụọ ọrụ igwe.
Principlekpụrụ a bụ maka ịgọnahụ na e nwere ụdị mmegharị a maara nke ọma nke ụdị nke abụọ. Anyị maara na ntinye nke usoro na-anọgide dịpụrụ adịpụ agbanweghi agbanwe mgbe mgbanwe mgbanwe na-ewere ọnọdụ. Anyị makwaara na ọ na-abawanye mgbe mgbanwe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na-ewere ọnọdụ.
Iwu nke atọ nke thermodynamics
Lastkpụrụ ikpeazụ a nwere njikọ chiri anya na nke abụọ ma ewere ya dị ka nsonaazụ ya. Kpụrụ a na-ekwusi ike na enweghị ike ịnweta agba na agba site na ọnụọgụ nwere oke mgbanwe. Anyị maara na e nwere oke efu adịghị karịa opekempe okpomọkụ enwere ike iru. Na nkeji Kelvin anyị maara bụ 0, mana na ogo Celsius ọ bara uru nke -273.15 degrees.
Ọ na-ekwukwa na entropy maka ihe siri ike nke kristal zuru oke nke 0 kelvin ruru 0. Nke a pụtara na enweghị ọnya ọ bụla, yabụ sistemụ ahụ ga-adịgide adịgide. Ike nke nnwere onwe, ntụgharị na ntụgharị nke ụmụ irighiri ihe ndị mejupụtara ya ga-abụ ihe ọ bụla na okpomọkụ nke 0 kelvin.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere thermodynamics na ụkpụrụ ndị bụ isi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Thermodynamics